Wasaaradda Beeraha - Joornaalka "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Calaamadda Wasaaradda Beeraha
Calaamadda: Wasaaradda Beeraha
Wasiirka Wasaaradda Beeraha, Ganacsiga, Cunnada iyo Warshadaynta ee Gobolka Orenburg Sergey Balykin ayaa qabtay kulan ku saabsan ololaha beerista khudaarta dhulka furan, ...
Gobolka Yaroslavl, waxay bilaabeen inay isticmaalaan multicopter si ay ugu buufiyaan sunta cayayaanka, bacriminta iyo beeritaanka. Mashruucan tijaabada ah ayaa waxaa fulinaysa shirkadda Agromir agricultural Enterprise,sida ay ku warantay wakaalada wararka ee wasaaradda beeraha.
Beeritaanka dabacasaha iyo basasha ayaa ka bilaabmay gobolka Saratov
Beeraha khudaarta ee degmada Engels ee gobolka Saratov ayaa lagu beeray 10 hektar oo khudaar hore ah - basasha iyo karootada, sida ay sheegtay wasaaradda beeraha ee Ruushka. ...
Bandhiga "AgroComplex" ayaa ka furmay Ufa
Bandhigga 32-aad ee gaarka ah ee caalamiga ah "AgroComplex - 2022" ayaa shaqadiisa ka bilaabay Ufa, adeegga warbaahinta ee Wasaaradda Beeraha ee Ruushka ayaa werisay. Sanadkan bandhigga...
Gobolka Bryansk wuxuu kordhin doonaa aagga baradhada
Shir ay isugu yimaadeen guddiga...
U diyaargarowga ololaha abuurka xilliga guga ayaa lagu soo gabagabeeyay gobolka Nizhny Novgorod
Beeraha gobolka waxay diyaariyaan walxo abuur waxayna iibsadaan bacrimiyeyaasha. In ka badan 70% bacriminta macdanta laga soo bilaabo mugga la qorsheeyay ayaa horay loo iibsaday. Abuurka abuur...
Rajada laga qabo horumarinta dhismaha beeraha-warshadaha ee gobolka Novgorod ayaa looga hadlay kulan dhexmaray Wasiirka Beeraha iyo Guddoomiyaha Gobolka.
Wasiirka Beeraha Dmitry Patrushev ayaa kulan shaqo la qaatay Badhasaabka Gobolka Novgorod Andrey Nikitin, sida uu sheegay wargayska Wasaaradda Beeraha ee Ruushka. Dhinacyada ayaa ka wada hadlay...
Amaahda shaqada ee xilliyeedka ee Ruushka ayaa kordhay 3%
Wasaaradda Beeraha ee Ruushka waxay si joogto ah ula socotaa arrimaha amaahda ee dhismaha beeraha-warshadaha ee dalka. Marka loo eego xogta hawlgalka, wadarta tirada deymaha ee ay soo saartay furaha...
2022, beeralaydu waxay sii wadi doonaan inay helaan deymaha mudnaanta leh oo ah ilaa 5% sanadkii
Marka la eego korodhka heerka muhiimka ah ee Bangiga Ruushka, dawladdu waxay isbeddel ku samaysay barnaamijka deyn-bixinta wax-soo-saarka beeraha. Isla markaana, qiimaha doorbidka...